विद्यार्थी आन्दोलनका कारण गण्डकी मेडिकल कलेज बन्द - Health Today Nepal
विद्यार्थी आन्दोलनका कारण गण्डकी मेडिकल कलेज बन्द
February 22nd, 2019 समाचार0comments
पोखरा,१० फागुन । कलेजले नियमभन्दा बढी शुल्क असुल्न थालेपछि त्यसबिरुद्ध भईरहेको विद्यार्थी आन्दोलनले पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन ठप्प भएको छ । एमबिबिएस पढ्न ५५ लाखभन्दा बढी तिर्नुपरेपछि कलेजका विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।
विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कमा पढ्न पाउनुपर्ने र विद्यार्थीले तिरेको रकमको बिल, भौचर र रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि पठनपाठन अवरुद्ध भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीले रु ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारी नियम छ। तर, गण्डकी मेडिकलल कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट ८ लाख भन्दा बढी तिर्नुपरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
विद्यार्थीहरुको आन्दोलन चर्किदै गएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानविन गर्ने भएको छ। काउन्सिलले समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्यीय टोली खटाउने निर्णय गरेको छ । टोलीले आज र भोली मेडिकल कलेजमा पुगेर त्यहाँ देखिएको समस्या, विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्नु परेको कारण लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछन्। टोलीमा डा. विश्वराज दवाडी, डा. कालु सिंह खत्री र डा. सुनिलकुमार शाह छन्।
कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै माघ १७ देखि कक्षाकोठा, कलेज प्रशासन र अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा तालाबन्दी गरेका विद्यार्थीले मेडिकल कलेज परिसरमा रिले अनशन समेत गरेका छन्। तर,कलेज प्रशासनले भने कानूनअनुसार नै शुल्क लिएको जिकिर गरिरहेको छ ।
Previous article सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन जारी, आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार
Next article प्रदेश मातहत आएपछि लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताल औषधिविहीन, बिरामीलाई समस्या